Dharaarihii carcarta doorashada madaxtinnimo ee Soomaaliland taagnaa 2010-kii baa Faysal maalin Banka Wajaale qudbad murrashax isu-taagay | Berberatoday.com
Dharaarihii carcarta doorashada madaxtinnimo ee Soomaaliland taagnaa 2010-kii baa Faysal maalin Banka Wajaale qudbad murrashax isu-taagay
Dharaarihii carcarta doorashada madaxtinnimo ee Soomaaliland taagnaa 2010-kii baa Faysal maalin Banka Wajaale qudbad murrashax isu-taagay.
Waa magaalo xuduudeedda Wajaale qorrax kasoo baxeeda iyo meel mahwiya iyo Faysal iyo dadka reer Wajaale.Galin hore ayay ahayd illaa kow iyo tobankii.Inta aan ka xasuusto Faysal Cali Waraabe maalintaas dadka reer Wajaale waxu u sheegay laba arrimood oo midi waxqabadkiisa iyo mid iska ahaa duun u hadalkiisa!
Banka weyn ee Wajaale Faysal Cali Waraabe waxu kale oo uu ka ga baanay in xisbiga UCID markii labaad u gartay in isagu ka tartammo.
Sida la sheego amma ay tahay na dastuurka Soomaaliland waxu qabaa in xisbiyada qaranka qofkii ba laba jeer xaq u leeyahay inuu iska sharraxo.
Haddii weydiintaasi “Haa” la yidhaahdo waxa la ga been sheegayaa warka Hargeysa yaalla ee runta ah.
Axmed-Siilaanyo ummaddu shan sannadood bay dooratay ee muxuu ku fadhiyaa? Baarlamaanka Cirro kowda ka yahay sabab ma ayuu toban sannadood iyo dheeri uu kuraasta u dangiigaa?